Ngwa a na -ewu ewu nke na -ekpocha n'oge a | Bezzia
Ngwa na -ewu ewu nke na -eme nke ọma
Susana godoy | 10/09/2021 10:00 | Emezu
Enwere plugins bụ isi na mgbe ahụ ngwa na -ewu ewu bụ ihe anyị ga -ahụ n'oge ọ bụla. Mana na nke a, a hapụrụ anyị n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri 2021-2022 n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka anyị nọrọ ebe ahụ. Yabụ, ọ bụ oge ịchọpụta ihe niile ga -ewe na ọtụtụ ihe.
Mgbe ụfọdụ ọ na -amasị anyị ịgbaso ụdị nke anyị mana ọ naghị afụ ụfụ ijikọta ya na nkọwa ụfọdụ nke ndị na -eme mgbanwe. N'ihi na a ga -enweta ngwakọta nnabata maka ihu anyị kacha mma. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata ihe anyị na -ekwu maka ya, atụfula ihe na -esote.
1 Igwe ntị Maxi ka bụ nnukwu omume
2 Ịchafụ site n'olu ruo n'isi
3 Akara na -abịa n'etiti ngwa ndị a na -ewu ewu
4 Akpa nwere ihe mkpuchi
Igwe ntị Maxi ka bụ nnukwu omume
Ọla ntị bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa na nlele ọ bụla na-akwanyere onwe anyị ugwu ma anyị mara ya. Ya mere, ha na -adị njikere mgbe niile ịhapụ anyị ụdị dị iche iche dịka mkpa anyị si dị. N'afọ a, ị ga -edo anya nke ọma, n'ihi na ọ nweghị ihe a na -ahụghị na ha, mana anyị nwere ike ikwe ka ibu buru ibu buru anyị n'enweghị ihe egwu. N'ihi na ọla ntị maxi ga -abụ nnukwu kpakpando n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi. Nnukwu ka mma. N'ezie, ọ bụrụ na ị na -eche ụdị ụdị anyị ga -etinye na nha ahụ, anyị nwere nke ọma. N'ihi na ndị ejiri obere ihe na -egbu maramara mechie ga -abụ nke a na -ahụ anya n'oge a. Ị nwere ụdị ihe atụ n'uche? Dịka ọmụmaatụ, na Zara, ị nwere ike ịhụ ha na agba na ụdị dị iche iche.
Ịchafụ site n'olu ruo n'isi
Ọ dị ka anyị na -eleghachi anya azụ na nke iyi ihe mkpuchi ihu na -echetara anyị afọ 60 ebe onye ama ama dị ka nke a wepụrụ. Ọ dị mma ugbu a ị nwere ike ịdị ka kpakpando Hollywood maka ngwa ndị na -ewu ewu. Maka na ha ga -abụkwa ndị ga -eso gị aga njem ụbọchị gị. Ị nwere ike họrọ n'etiti usoro na agba dị iche iche nke ụlọ ọrụ na -atụpụta, n'ihi na anyị na -ahapụ nke ahụ n'echiche gị. Mana oge a, anyị agaghị ahụ naanị ka esi etinye ịchafụ ahụ ka ọ bụrụ isi mana ọ ga -ekpuchi isi ya niile ka ọ kee n'olu.
Akara na -abịa n'etiti ngwa ndị a na -ewu ewu
N'ezie, ọ bụrụ naanị na anyị na -ekwu maka eriri, ọ bụghị ihe na -eju anyị anya n'ihi na anyị amaralarị na ha na -eso anyị mgbe niile n'ọdịdị kacha mma. Mana ekwesịrị ikwu na na nke a, ndị buru oke ibu na -agakwa ike. Ee, ọ dị ka n'agbata ọla na eriri, ọmarịcha anya ga -ezu oke n'oge na -adịghị anya. Site na ngwụcha XXL, ha ga -ahụ maka inyekwu ụdị gị ọkụ, iji mezue ya n'ụdị na ụcha nke ị họọrọ. Yabụ, ị ga -ahụ onye ị na -achọ, mana chetakwala na ị gaghị echefu ya. Ma ụdị ejiji na agbụ ígwè bụ ụfọdụ nnukwu echiche na -eche gị.
Akpa nwere ihe mkpuchi
Ọ bụ eziokwu na akpa ndị ahụ agaghị agbaghara ụbọchị mgbụsị akwụkwọ anyị. N'ihi na mgbe anyị na -ekwu maka ngwa ndị na -ewu ewu, ị chọghị ileghara ihe ngosi a anya. Mana, n'agbanyeghị na anyị nwere ike iyi ha n'ụzọ dị iche iche yana jiri ụcha dị iche iche, enwere otu nkọwa ga -apụta ihe karịa ndị ọzọ niile. Ọ bụ maka ngwụcha ya na ọ bụ na ndị nwere braids ga -abụ ndị ga -eweghara oge ọhụrụ a. Ọ dị ka anyị achọghị ịhapụ oge ọkọchị ma hụkwa ihe ngwụcha ndị a n'oge ọkọchị. Yabụ na ha ka nọ ebe ahụ ma sie ike karịa mgbe ọ bụla. Họrọkwa ụdị sara mbara na akpa n'ihi na ha ga -emecha ụbịa ọhụrụ gị dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » ejiji » Emezu » Ngwa na -ewu ewu nke na -eme nke ọma
4 usoro etemeete maka ọdịda 2021